Tia Tena Be Aho Taloha | Manova Olona ny Baiboly
Ny Tilikambo Fiambenana | Oktobra 2014
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Batak (Toba) Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Drehu Efik Esan Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Galoà Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kabuverdianu Kambôdzianina Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Luo Malagasy Malezianina Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Masedonianina Maya Mingrelian Mongol Myama Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ngabere Nias Niue Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ourdou Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Quiché Rarotonga Romanianina Rosianina Rômania (Vlax any Rosia) Samoanina Sango Sepedi Sepulana Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Talian Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Umbundu Valencienne Venda Vietnamianina Wallis Xhosa Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Éwé
Tia Tena Be Aho Taloha
Notantarain’i Christof Bauer
FIAINANY TALOHA: NANAMBONY TENA SY TSY NANAO AFA-TSY IZAY TIANY
Nipetraka tany akaikin’i Leipzig, any Alemaina Atsinanana, izahay, tamin’izaho mbola kely. Tsy lavitra an’i Tsekoslovakia sy Polonina izy io. Nifindra tany Brezila izahay, tamin’izaho enin-taona, dia avy eo tany Ekoatera. Tany mantsy no niasa ny dadako.
Nalefa tany amin’ny sekoly kilasimandry tany Alemaina aho, tamin’izaho 14 taona. Nahatsiaro ho niady irery aho, satria lavitra ray aman-dreny. Lasa tsy nanao afa-tsy izay tiako aho. Tsy nivakiako loha, na dia nisy vokany ratsy tamin’ny olona aza ny zavatra nataoko.
Nody tany Alemaina ny ray aman-dreniko, tamin’izaho 17 taona, ka niara-nipetraka indray izahay. Tsy tamana anefa aho satria tsy te hofehifehezina. Niala tao an-trano aho, tamin’izaho 18 taona.
Lasa niady saina be aho satria hoatran’ny tsy nisy dikany mihitsy ny fiainako. Nandinika ny fiainan’ny olona sy ny zavatra ataon’ny fikambanana isan-karazany àry aho. Tapa-kevitra aho nony farany fa hitety tany mba hijery zavaboary, dieny mbola tsy simba be ny tontolo iainana. Izay no hitako hoe tena nety tamiko.
Nividy môtô aho, dia nankany Afrika. Tsy ela anefa, dia simba ilay môtô, ka niverina tany Eoropa aho nanamboatra an’ilay izy. Nankany amoron-dranomasina tany Portogaly aho, taoriana kelin’izay. Tapa-kevitra aho tany fa handeha sambo indray fa tsy hitaingina môtô intsony.
Nihaona tamin’ny tanora maromaro handeha sambo hamakivaky ny Oseana Atlantika aho tany. Nisy tovovavy atao hoe Laurie tamin’izy ireo, izay lasa vadiko tatỳ aoriana. Nandeha sambo nankany Karaiba izahay, dia nandalo kely tany Porto Rico, ary niverina tany Eoropa. Nitady sambolay azo asiana efitra hipetrahana izahay tany. Rava anefa ilay nofinofinay, telo volana monja tatỳ aoriana, satria voantso ho miaramila tao amin’ny tafika an-dranomasina alemà aho.
Herintaona sy telo volana aho no tao. Efa nivady izahay sy Laurie tamin’izay, ary mbola nieritreritra ny handeha sambo ihany. Efa nahazo sambokely izahay, taloha kelin’ny niantsoana ahy ho miaramila. Novanay tsikelikely ho sambolay àry ilay izy. Nieritreritra ny hipetraka ao izahay, dia hitety indray an’ity planeta kanto misy antsika ity. Nihaona tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah anefa izahay, ka nianatra Baiboly. Efa tsy miaramila intsony aho tamin’izay, fa mbola tsy tena nahavita an’ilay sambo.
Tsy dia hitako loatra tamin’ny voalohany hoe inona ny fiovana mila ataoko. Efa tsy nanao tokantranomaso intsony mantsy izahay roa, sady efa tsy nifoka sigara intsony aho. (Efesianina 5:5) Nieritreritra koa aho hoe tsy misy maharatsy an’ilay mitety an’izao tontolo izao mba hijery ny zavatra mahavariana noforonin’Andriamanitra.
Nila niova anefa aho, raha ny marina, ary ny toetrako no tena nila novana. Nanambony tena loatra aho sady tsy nanao afa-tsy izay tiako. Nilaozako nanatsara ny fahaizako sy ny zavatra nataoko. Tia tena be aho.
Namaky an’ilay toritenin’i Jesosy teo an-tendrombohitra aho, indray mandeha. (Matio toko faha-5-7) Gaga aho namaky an’ilay izy. Nilaza, ohatra, i Jesosy fa sambatra izay noana sy mangetaheta. (Matio 5:6) Tsy azoko hoe olona hoatr’izany ve dia ho sambatra! Rehefa nianatra Baiboly elaela anefa aho, dia lasa azoko fa noana sy mangetaheta ara-panahy daholo isika, izany hoe mila an’Andriamanitra. Tsy ho sambatra anefa isika raha tsy manaiky aloha hoe mila azy, ka miezaka mitady azy. Hoy mantsy i Jesosy: “Sambatra ny mahatsapa fa mila an’Andriamanitra.”—Matio 5:3.
Vao nianatra Baiboly kelikely izahay, dia nifindra tany Frantsa, ary avy eo tany Italia. Nahita Vavolombelon’i Jehovah foana izahay, na taiza na taiza nalehanay. Gaga be aho satria nifankatia be ry zareo sady niray saina. Niaiky aho hoe tena fianakaviana iray ny Vavolombelon’i Jehovah eran-tany. (Jaona 13:34, 35) Natao batisa àry izahay sy Laurie, ka lasa Vavolombelon’i Jehovah.
Mbola niezaka nanova ny toetrako foana aho, taorian’ny batisako. Nanapa-kevitra izahay roa tamin’izany hoe handeha sambo hanaraka ny morontsirak’i Afrika, dia hamakivaky ny Oseana Atlantika, ary tsy hijanona raha tsy any Etazonia. Izahay roa irery no tao anatin’ilay sambokely, ary ranomasimbe no nanodidina anay. Tonga saina aho tamin’izay hoe hay tena tsy misy dikany aho raha oharina amin’ilay Mpamorona ahy. Nanam-potoana be namakiana Baiboly koa aho teny ambony sambo, satria tsy dia misy atao firy eny. Tena nanohina ny foko ny namaky ny tantaran’i Jesosy. Lavorary izy sady mahay lavitra noho ny olombelona, nefa tsy nirehareha mihitsy. Tsy tia tena izy fa nanome voninahitra ny Rainy any an-danitra.
Tonga saina aho hoe mila mitory ny Fanjakan’Andriamanitra aho aloha, izay vao manao ny zavatra hafa tiako hatao
Rehefa nisaintsaina ny modely nomen’i Jesosy koa aho, dia tonga saina hoe mila mitory ny Fanjakan’Andriamanitra aho aloha, izay vao manao ny zavatra hafa tiako hatao. (Matio 6:33) Nanapa-kevitra ny hijanona tany Etazonia àry izahay, ary nifantoka tamin’ny fanompoana an’Andriamanitra.
Niady saina be aho taloha, rehefa hanapa-kevitra. Izao anefa aho mahazo tari-dalana tena tsara. (Isaia 48:17, 18) Izao koa vao tena misy dikany ny fiainako, satria manompo an’Andriamanitra aho sady manampy olona hahalala azy.
Lasa nifankatia be izahay mivady satria nampihatra ny toro lalan’ny Baiboly. Faly koa izahay fa niteraka vavy kely mahafatifaty, ary lasa mahafantatra tsara momba an’i Jehovah sy tia azy io zanakay io.
Tsy hoe nisosa tsara hoatran’ny mandeha sambo foana akory ny fiainanay. Nampian’i Jehovah anefa izahay, ka tapa-kevitra fa tsy hivadika aminy mihitsy sy hatoky azy foana.—Ohabolana 3:5, 6.
Hizara Hizara Tia Tena Be Aho Taloha
MATOAN-DAHATSORATRA Ilaina ny Mahalala ny Fanjakan’Andriamanitra
MATOAN-DAHATSORATRA Nahoana i Jesosy no Nitory ny Fanjakan’Andriamanitra?
MATOAN-DAHATSORATRA Hanova ny Fiainanao ny Fanjakan’Andriamanitra
RESADRESAKA MAHALIANA Oviana no Nanomboka Nanjaka ny Fanjakan’Andriamanitra? (Fizarana 1)
MANOVA OLONA NY BAIBOLY Tia Tena Be Aho Taloha
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA Hanova ny Fiainanao ny Fanjakan’Andriamanitra
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA Hanova ny Fiainanao ny Fanjakan’Andriamanitra
Hanova ny Fiainanao ny Fanjakan’Andriamanitra
NY TILIKAMBO FIAMBENANA Hanova ny Fiainanao ny Fanjakan’Andriamanitra